Culimada Puntland Oo Ku Baaqay In Laga Hortago Kufsiga Iyo Afkaarta Takfiirka-Dhageyso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Culimada Puntland Oo Ku Baaqay In Laga Hortago Kufsiga Iyo Afkaarta Takfiirka-Dhageyso
Culimada Puntland Oo Ku Baaqay In Laga Hortago Kufsiga Iyo Afkaarta Takfiirka-Dhageyso
Waxaa magaalada Boosaaso lagu soo gaba gabeeyay nadwo Diimeed dhowrkii casho ee lasoo dhaafay ka socotay masjidka Al-Rowda Ee Gudaha Magaalada Boosaaso
Nadwadan oo ahayd tii 17-aad oo xiriir ah ayaa waxaa ka qeybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada kunool Boosaaso iyo Culimo isaga kala yimid gobolo kamid ah Soomaaliya.
Ciwaanka nadwadda ayaa sanadkan waxa uu aaha ahaa heshiisyada maaliga ah iyo sida loo maareeyo waxaana intaay socotay su’aalo lagu weydiinayay culimada ka qeybgashay kulanka .
Gabagabadii Nadwadda ayaa waxaa laga soo saaray bayaan ka kooban 10 qodob kuwaas oo intoo badan diiradda lagu saaray wacyiga xiligan ee bulshada sida tacadiyada Kufsi iyo dilal ee kusoo badanaya gudaha dalka gaar ahaan deegaanka Puntland sida uu bayaanka warbaahinta ugu akhriyay sheekh Axmed Faarax Garaase.
Bayaaanka laga soo saaaray Nadwada waxaa lagusoo dhaweeyay warkii dhawaan kasoo yeeray wasaaradda Cadaaladda Puntland ee ahaa in la burburiyo goobaha madaarisa iyo Masaajidada ee ay leeyihiin kooxaha loo yaqaan Takfiirka ee ku sugan deegaanada Puntland iyadoona culimada bayaanka soo saaray ku baaqay in af iyo Addin looga hortago afkaaraha khaldan ee kooxdan.
Dhanka kalena Cabduqaadir Cabdulaahi Shire oo ah isu duwaha wasaaradda Cadaaladda Puntland e gobolka Bari iyo Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin oo gabagabadii lagu soo dhaweeyay Nadwa diimeedka ayaa culimada ku bogaadiyay kaalinta ay ka qaadanayaan baraarujinta bulshada iyagoona ku baaqay in loo guntado ka hortagga wax waliba oo dhaawaci kara diinta islaamka.
Sanad waliba xiligan oo kale ayaa culimada Puntland ay qabtaan nadwa diimeed ay uga hadlayaan arimaha taagan ee u baahan in bulshada laga wacyeli galiyo iyadoo ay noqonayso nadwaddan sanadkan tii 17-aad oo ay qabtaan culimada Puntland.